नेपालमै कसरी सम्भव भयो यस्तो चमत्कार ? आन्द्रा र कलेजो पेटबाहिर निस्किएको शिशुलाई डाक्टरले बचाए – My Blog
No Comments on नेपालमै कसरी सम्भव भयो यस्तो चमत्कार ? आन्द्रा र कलेजो पेटबाहिर निस्किएको शिशुलाई डाक्टरले बचाए
काठमाडौ । जआन्द्रा र कलेजो पेटबाहिर निस्किएको १ शिशुको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको शल्यक्रिया सफल भएको छ । भोजपुरको दावा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दमा जन्मिएका सिद्धेश्वर गाउँपालिका–४ मान्द्रेका सन्ध्या विकको शिशुलाई गत असार २१ गते प्रतिष्ठानमा भर्ना गरिएको थियो ।
शिशुलाई १ महिनासम्म एनआईसीयूमा राखेर प्रतिष्ठानका डा। राजेश साहको टोलीले शल्यक्रिया गरी बाहिर निस्किएको आन्द्रा र कलेजो मिलाएको थियो । १२ हजार शिशुमध्ये १ जनामा यस्तो समस्या आउने डा। साहले बताए । ‘विभिन्न कारणले जन्मनुभन्दा अगाडि पेट राम्ररी नबनेको बच्चा जन्मँदा यस्तो समस्या आउने गर्छ । यसलाई ग्यास्ट्रोजचेसिज भनिन्छ,’ उनले भने ।
शिशुको नाइटोबाट पूरै आन्द्रा बाहिर निस्किएकामा १५ दिनसम्म प्लास्टिकको ब्यागमा हालेर एनआईसीयूमा राखी शल्यक्रिया गरिएको थियो । जन्मँदा नानीको स्वरूप नै बिग्रिएको र शल्यक्रियापछि राम्रो भएको शिशुका बुवा नवराज परियारले बताए ।शल्यक्रियापछि घाउ पाकेकाले बुधवार चिकित्सकको सल्लाहअनुसार ‘फलोअप’मा राखिएको छ ।
५ वर्षअघि डा। राजेश प्रतिष्ठान आएपछि यस्ता जटिल प्रकृतिका बच्चाको उपचार सहज र सुलभमा हुँदै आएको छ । यसअघि भारत तथा काठमाडौंका महंगो अस्पतालमा यस्ता बिरामीको उपचार गराउँदा लाखौं रकम खर्च हुने गथ्र्योे तर प्रतिष्ठानले भने शल्यक्रिया शुल्क १३ हजार मात्र लिँदै आएको छ । औषधि तथा अन्य सबै गरेर ५० हजार रुपैयाँमा उपचार हुँदै आएको छ ।
← आफैले जन्माएको छोराहरुलाई पाल्न सक्छस् भने पाल सक्दिनस् भने छतमा लगेर त ल झा’रिदे भन्दै श्रीमानले भने पछी श्रीमतीले गरिन देह त्यागको प्रयास ! → काठमाडौंमा श्रीमतीको ह’त्या गरी श्रीमान आफैंले गरे प्रहरीलाई फोन